TSIANIHY : TOMPON’ANTOKA AMIN’NY FAHAFATESAN’IREO MIARAMILA RAJOELINA – MyDago.com aime Madagascar
Niompana tamin’ny fanehoan-kevitra mikasika ny zavanitranga tany Amboasary Atsimo ny kabary nataon’ny CT Tsianihy avy any Androy teny amin’ny Magro Behoririka androany. Nambarany fa maro ny voalazan’ny gazety mikasika iny tany Amboasary Atsimo iny, fa ny tena marina dia tsy afaka miala amin’izany Rajoelina sy ny forongony. Ny vahoaka any amin’iny faritra iny, hoy izy dia mifankafantatra avokoa fa ny toerana fotsiny no mifanalavitra. Anisan’ny mampitovy ny dahalo sy Rajoelina dia ny mpanongam-panjakana manana kalach, lance rocket,. Ny dahalo kosa dia izay fitaovana hananan’ny miaramila dia hananan’izy ireo avokoa. Iray reny iray ray ireo hoy izy fa ny toerana no samy hafa. Ny mampalahelo dia mbola tsy azo ny fatin’ireo miaramila sy zandary kanefa mijery fotsiny ny fitondran-dRajoelina. Tsy afabela ianareo fat fa tomponantoka amin’ny fahafatesan’ireo miaramila ireo. Tsy afaka hanao fetim-pirenena hoy Tsianihy ny vahoaka any amin’ny disitrikan’Anosy. Ny antony dia tsotra fa ny vahoaka any dia tsy manana borigaden’ny zandary ka mitsoaka mankany amin’ny sefo disitrika. Raha tsorina hoy izy dia tratran’ny traboina ny vahoaka any amin’ny faritra Amboasary Atsimo noho ny fitondran-dRajoelina. Zavatra tsy mbola nisy teto ambonin’ny tany izanydahalo nahafaty miaramila izany raha tsy tamin’ity nametrahana an-dRajoelina ity. Marina hoy Tsianihy fa mitolona isika mitaky ny fahamarinana nandritra ny telo taona. Ny zavatra tsy azon’ny fat ialana dia ny dahalo no hanala ny fahefana eo amin-dRajoelina. Isika zanak’iDada dia tsy hanaiky ny fanonganam-panjakana ary tsy hanaiky ny malaso hitondra ny firenena. Ny vahoaka any Atsimo hoy ity olomboantendry ity dia efa miandry ny fiverenan’ny filoha Ravalomanana.
Ampiharo haingana ny andininy faharoapolo hoy Tsianihy !
Embenanana Miaramila Magro noho ny tahotra !
8 réflexions sur « TSIANIHY : TOMPON’ANTOKA AMIN’NY FAHAFATESAN’IREO MIARAMILA RAJOELINA »
15 juin 2012 à 18 h 55 min
mahamenatra anay ianao!mba olondehibe ihany!n’importe koi
15 juin 2012 à 19 h 14 min
Il y a beaucoup de fous dans le village. Mandady ny foza.
16 juin 2012 à 8 h 32 min
Fomban-Dahalo io ataon ny FAT io nanomboka t@ 17mar2009
Mba hafa-fijery isika rey olona – Amiko aloha dia samy manana ny heviny ny olon-drehetra – Rehefa milalao basy ny miaramila, na ny polisy na ny gendarme ka ataon’izy ireo amin’ny tsy tokony ampiasana azy izany dia na inona na inona dia tsy maintsy mifototra amin’ny tompony ihany izany.
Mampalahelo aloha ny zava-mitranga ka an’Andriamanitra irery ihany ny vaha-olona, fa izay rehetra mitady vaha-olona marina dia ampiany. Fa ny ratsy anie tsy maintsy ho resy é !
Be loatra ny asa ratsy azo tsapain-tànana eto amin’ny firenena ka dia samy manao izay tiany avokoa. Indrisy !
Fa amiko, na ho ela na ho haingana, ka mahay mitodi-doha amin’Andriamanitra isika dia ho vahany izao fahasahiranana, sy vonoan’olona izao.
16 juin 2012 à 11 h 51 min
Dia ho ataon’Andriamanitra hihinan’ny tsy fihinany eo izany isika ê ! Efa ho telo taony sy tapany izao !
Efa atramin’ny 1975 no nanomboka, dia mba nisy fitòna kely tamin’ny 2002-2009, dia iny indray Andriamanitra sy ny antsibeany !
Tsy mitovy marina ny hevitry ny rehetra !
Tsy fitòna fa fihatoana raha mbola tsy diso ihany koa !!
Ahoana ry Tsianihy, Ianao nitondra an ra8 tany Fort Dauphin tam 2009,teo Atanambao, notorahan’ny vahoaka vato ra8 tamin’izay, satria nofitahinao ra8 hoe: mbola tian’ny olona aty atsimo ianao President. dia vaky nandositra avy hatrany ny cortege nankeny am aeroport.
Aza mamitaka olona intsony ry Tsianihy fa ianao ange mbola handrasan’ny olona aty e.
Kintana, mdr !
Miombok’evitra amiano izaho !!!
Précédent Article précédent : MAGRO BEHORIRIKA : TSY MANAIKY NY ANTSONJAY ATAO AMIN’NY RAVALOMANANA
Suivant Article suivant : HANDATSAM-BATO HO AN’I DADA ny etsy amin’ny Magro rahampitso !